Ndeipi Ramangwana rePassive Dhata Kuunganidzwa? | Martech Zone
Ndeipi Ramangwana rePassive Dhata Kuunganidzwa?
Chipiri, Mbudzi 3, 2015 Chitatu, November 4, 2015 Douglas Karr
Kunyangwe vatengi nevatengesi zvakafanana vanotaura kungoita data muunganidzwa sechinhu chiri kukura chekuziva kwevatengi, vangangoita zvikamu zviviri kubva muzvitatu vanoti ivo havasi kuzoshandisa paseti yedhata makore maviri kubva zvino. Kutsvaga kunobva kutsvagurudzo nyowani yakaitwa na GfK uye iyo Institute for International Research (IIR) pakati pevanopfuura mazana manomwe vatengi vekutsvagisa musika nevatengesi.
Chii chinonzi Passive Data Unganidzo?
Passive data muunganidzwa iko kuunganidzwa kwevatengi dhata kuburikidza nemaitiro avo uye kudyidzana pasina kushingairira kuzivisa kana kukumbira mutengi mvumo. Muchokwadi, vatengi vazhinji havatomboziva kuti yakawanda sei data iri kutorwa, uye kuti iri kushandiswa kana kugoverwa sei.
Mienzaniso yekungotora data muunganidzwa ndeye browser kana nhare mbozha inorekodha nzvimbo yako. Kunyangwe iwe ungave wakadzvanya zvakanaka pawakatanga kubvunzwa kana zviwanikwa zvichikutarisa, chishandiso chinonyora chinzvimbo chako kubva ipapo zvichienda kunze.
Sevatengi pavanoneta nekuvanzika kwavo kuri kushandiswa munzira dzavange vasina kumbofungidzira, kushambadzira -kuvharira uye zvakavanzika kubhurawuza sarudzo zviri kuramba zvichinyanya kufarirwa. Muchokwadi, Mozilla yakangozivisa kuti Firefox yakatsigira yayo yega yekuvhura maitiro ne ichivharira vechitatu-bato trackers. Izvi zvinogona kunge zviri pamberi pemitemo yehurumende - iyo iri kutsvaga kuchengetedza vatengi uye dhata ravo zvakanyanya.
Mhedzisiro kubva Remangwana reZvakanzwisisika zvakare zvinoratidza kuti:
Kukanganisa kwebhajeti varipo uye vangangoramba vari inotungamira nyaya yesangano kune vatengi nevatengesi; asi zvimwe zvakasiyana zvekunetseka - kubva mukubatanidzwa kwedata kusvika kuzvinetsekedzo zvemutemo - zvinoonekwa sekunge zvakaenzana mukukosha.
Vanoda kusvika vatanhatu mugumi vatengi uye vanotengesa vanoti vachange vachiita tsvagisa uchishandisa nharembozha uye / kana nharembozha makore maviri kubva zvino - nevatengesi vangangodaro vachiti vari kutozviita.
Nhanho yekuziva chizvarwa kukanganisa sarudzo dzebhizinesi inoonekwawo seyakakosha musiyano muindasitiri nhasi, ichirova yechipiri pakati pevatengi (17%) uye chechitatu pakati pevatengesi (15%).
Vanenge chetatu chevagashiri vakati nzira dzavo dzakakosha kwazvo dzekuunganidza dhata makore maviri kubva zvino ichave yekungotora data kuunganidza kunyangwe zvikamu zviviri muzvitatu zvisiri kuita chero nhasi. Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemakambani ekutsvagisa musika havatarisiri kunge vari kungoita zvakapusa kuunganidzwa kwedatha mumakore maviri.
Passive Data Kuunganidzwa: Kwakanaka kana Zvakaipa?
Kuti vatengesi vamire kudzongonyedza uye vatange kugoverana akakodzera, kunyangwe akumbirwa, kupihwa kune vatengi, vatengesi vanofanirwa kutora data. Iyo data inofanirwa kuve yakajeka kwazvo uye iripo mune chaiyo-nguva. Kururamisa kunopihwa nekusimbisa iyo data kubva kune dzinoverengeka masosi. Yechokwadi-nguva haisi kuzoitika kuburikidza neongororo kana yechitatu-mapato… inofanirwa kuitika panguva imwe chete nehunhu hwevatengi.
Zvichida vatengesi vakaunza izvi pavari - kuunganidza terabytes yedata kune vatengi, asi vasingamboishandisa kuhungwaru kupa zvirinani mushandisi ruzivo. Vatengi vanodyiswa, vanongonzwa vachishandiswa uye nekushungurudzwa sezvo yavo data iri kutengwa, kutengeswa uye kugovaniswa pakati pematani ezviwanikwa spamming iwo marara kunze kwavo.
Kutya kwangu ndekwekuti, pasina kungoita data muunganidzwa, madziro anotanga kukwira. Mabhizimusi haadi kuzoburitsa zvemukati zvemukati, maturusi uye maapplication ekuvandudza ruzivo rwevatengi nekuti havagone kuunganidza chero data rinoshandiswa kubva pairi. Isu tinonyatsoda kunanga munzira iyoyo? Handina chokwadi chekuti tinoita… asi zvakadaro handikwanise kupa mhosva kuramba.
Tags: gfkIIRInstitute for International Tsvakurudzokutsvakurudza misikapassive datakungoita data muunganidzwakuyerwasurvey
Yako B2B Isu Inofanirwa Kusanganisira Ecommerce
Vatengi Sarudza Sarudzo uye kudyidzana… kunyangwe iine Vhidhiyo